तपाइँको ब्यापारलाई बढावा दिनको लागि मेरो पहिलो गुगल एड्वर्ड्स विज्ञापन क्रिएटिव अनलाइन
गुगल ऐडवर्ड्स हो गुगल विज्ञापन उपकरण यसले तपाईंलाई साधारण विज्ञापन सिर्जना गर्न अनुमति दिनेछ जसले तपाईंको कम्पनीसँग सम्बन्धित जानकारीको खोजीमा प्रयोगकर्ताहरूलाई प्रभाव पार्छ। यी विज्ञापनहरू अन्य खोजहरूको अगाडि उभिन्छन्।
साथै प्रदर्शन नेटवर्कमा उपस्थित हुन अनुमति दिनुहोस् यसको मतलब के हो? यो साझेदार साइटहरूको श्रृंखलामा रहेको जस्तो सजिलो छ जुन वेब प्रयोगकर्ताहरूको%%% पुग्छ। ती ती विज्ञापनहरू हुन् जुन वेबमा देखा पर्दछ, पाठ वा पक्षहरू बीच, वा YouTube मा पनि। तिनीहरू अधिक लचिलो छन्, ती छविहरू, ब्यानरहरू, अन्यहरू समावेश गर्न सक्छन्।
गुगल ऐडवर्ड्समा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको तपाईंको विज्ञापन कति पटक देखाइएको होईन, तर एक प्रयोगकर्ताले कति चोटि विज्ञापनमा क्लिक गर्दछ र तपाईं आफ्नो बास गर्नुहुन्छ साइट, त्यो मात्र हो तपाइँ क्लिकहरूको संख्या को लागी भुक्तान गर्नुहोस्.
तपाईको वेबसाइटलाई बढावा दिन र लक्षित दर्शकहरूमा पुग्न यो राम्रो उपकरण हो।
1 र तपाईं गुगल एडवर्डमा कसरी विज्ञापन सिर्जना गर्नुहुन्छ?
2 मेरा ग्राहकहरूले मलाई के शब्दहरू खोज्छन्?
र तपाईं गुगल एडवर्डमा कसरी विज्ञापन सिर्जना गर्नुहुन्छ?
यो पहुँच को रूप मा सरल छ गुगल ऐडवर्ड्सघरमा हामी एक ईमेल र पासवर्ड, सिफारिश गरिएको जीमेल प्रविष्ट गरेर पहुँच गर्न सक्दछौं।
अर्को चरण भनेको हाम्रो वेबसाइट वा हाम्रो फेसबुक खाता थप्नु हो। बिभिन्न इनपुटहरू देखा पर्नेछन्। तिनीहरूले हामीलाई बजेटको लागि सोध्नेछन्, लक्षित श्रोताहरूले क्षेत्र / स्थान, खोजी नेटवर्क (गुगल) थप्ने र प्रदर्शन नेटवर्क वेबसाइटहरू, ब्यानरहरू / छविहरू, यूट्यूब, अन्यलाई उल्लेख गर्दै। अन्तमा, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको कुञ्जी शव्दहरू (कुञ्जीशब्दहरू) संकेत गर्नु हो जसले हामीलाई सेवा दिनेछ ताकि जब कसैले सेवाको लागि खोजी गर्दछ हामी देखिन सक्दछौं। शब्दहरूको सूची बनाउनुहोस् जुन हाम्रो व्यवसाय / सेवासँग सम्बन्धित छ। सिफारिश गरिएको न्यूनतम १ 15 शब्द हो। हामीले आफैलाई निम्न प्रश्न सोध्नु पर्छ:
मेरा ग्राहकहरूले मलाई के शब्दहरू खोज्छन्?
हामी प्रस्ताव स्थापना गर्न जाँदैछौं, पहिलो अभियान भएकोले यो उत्तम हो कि हामी स्वचालित विकल्प मार्क गर्छौं। एकपटक हामीसँग सेक्टरमा परिपक्वता भए पछि हामी म्यानुअलमा स्विच गर्न सक्दछौं।
अन्तमा, हामीले मिलेर बनेको विज्ञापन लेख्नुपर्दछ:
पहिलो वर्णनात्मक लाइन (characters 35 वर्ण)
यो महत्त्वपूर्ण छ कि शीर्षकमा हामीले एउटालाई थप्यौं खोजशब्दहरू गुगलमा अधिक प्रासंगिकता उत्पन्न गर्न र हाम्रो स्थिति राम्रो छ। बाँकी पूर्ण गर्न बिलि information जानकारी र सबै थप गरिएको जानकारीको समीक्षा हुनेछ।
तपाईंको व्यवसायलाई बढावा दिनुहोस्!
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » ट्रिक्स » गुगल एडवर्डमा मेरो पहिलो विज्ञापन